'पर्यटन उद्योग राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ' - Arthatantra.com
‘पर्यटन उद्योग राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ’
मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा स्वर्णजयन्ती बिशेष समारोह
नाट्टा १९६६ मा स्थापना भएको हो । अहिले संस्था स्थापनाको पचासौँ वर्ष पूरा गरेको छ । हाम्रो कार्यकालमा नै स्वर्ण जयन्ती महोत्सव मनाउने अवसर जुरेको छ । यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा राजधानीको दरबार मार्गमा अवस्थित याक एण्ड यति होटलमा विशेष समारोहको आयोजना हुँदैछ । समारोहमा ४० भन्दा बढी विदेशी अतिथिलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । उहाँहरुको नेपाल आउनेक्रम पनि सुरु भैसकेको छ । हामीले कार्यक्रमलाई चार चरणमा विभाजन गरेका छौँ । पहिलो चरणमा हाम्रो प्राथमिकता पर्यटन उद्योग हो । यो विषय विदेशी अतिथिहरुसँग राख्नेछौं । यता सरकारले पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता राखेपनि सुविधाको कुरामा त्यती ध्यान नदिएकाले यस बारेमा के गर्न सकिन्छ भनेर निक्र्यौल गर्दैछौँ ।
नेपाली पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने
नेपाली पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरिनेछ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारलाई नेपालसँग कसरी जोड््न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा स्पष्ट अबधारणा अघि सार्दैछौँ । उद्घाटन सत्रमा हामी पचास वर्षमा गरिएका गतिविधि र अग्रजहरुको योगदानका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने छौँ भने आगामी दिनमा कसरी विशिष्ट उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा छलफल गरी लिपिवद्ध गर्ने छौँ । र उक्त विषयलाई योजनावद्ध ढंगबाट कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ ।
नाट्टाको पचास वर्षे इतिहाँसलाई फर्केर हेर्दा
१०/१२ ओटा ट्राभल एजेन्सिहरुबाट सुरु भएको अभियान एक हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरुलाई साथमा लिएर अघि बढिरहेको छ । आज नेपाल सरकारले पर्यटन नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा नाट्टासँग सहकार्य गरिरहेको छ । जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय पनि हो । नेपालको इतिहासमा पर्यटन विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार सँगसँगै साथमा रहेर हामीले प्रबद्र्धनात्मक कार्यहरु गरिरहेका छौं । नाट्टाले आफ्नै पहलमा पर्यटन विस्तारका लागि धेरै कार्यहरु गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिने, हामी आफैँले सम्मेलनहरु गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र ट्राभल एजेन्सिहरुलाई ल्याएर स्थलगत भ्रमण(फार्म ट्रिप) गराएर पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान दिइरहेका छौँ । यसरी नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने काम हामीले नै ग¥यौँ र यो क्रम अझै जारी रहेको छ ।
रचनात्मक तरिकाले राज्यलाई सहयोग गरिरहेका छौँ
नेपाल नाट्टा आफैँमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय हैन । हामी माग पेश गर्न र दबाब दिन सक्छौ जुन काम गरि पनि रहेका छौँ । हामी रचनात्मक तरिकाले राज्यलाई सहयोग गरिरहेका छौँ । अग्रणी व्यवसायीको छाता संगठन भएकाले सरकारलाई हाम्रो आग्रहयुक्त सुझाव छ । सरकार परिवर्तन भैरहने कारण हाम्रो मागहरु सम्बोधन हुन सकेको छैन । एउटा सरकारसँग बसेर एक खाले नीति तयारी गरिरहेको हुन्छ अर्को सरकार आएपछि पुनः सुरुबाटै काम गर्नुपर्ने बाध्यताहरु आइलागेका छन् । हामी सरकारसँग माग्दैनौ तर नीतिमा सहजिरकण गरिदन आग्रह गरिरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बजारिकरण गर्ने र नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याइ देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा हामी ट्राभल एजेन्सिहरुले योगदान गर्छौ । ट्राभल एजेन्सि एउटा त्यस्तो संस्था हो हामीले धेरैलाई रोजगारी दिन्छौँ । जस्तो कि हामीले ल्याएको पर्यटक होटलमा बस्छ, ट्याक्सी चढ्छ, विभिन्न स्थानमा सपिङ गर्छ । त्यसले हाम्रो आम्दानी कम भए पनि देशका बहुक्षेत्रलाई लाभान्वित गर्छ । त्यसले हामी अग्रणी संस्था भएको कारणले हामीले नारा पनि ʽनेपालको पर्यटन राष्ट्रिय प्राथमिकताको उद्योगʼ भन्ने बनाएका छौँ । नेपालको समग्र पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहन्छ ।
पर्यटकहरु आफैँ आउने हैनन् संसारका सबै देश पर्यटक तान्न आतुर छन
वास्तवमा पर्यटकहरु आफैँ आउने हैनन् संसारका सबै देश पर्यटक तान्न आतुर छन । अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ । हाम्रा उत्कृष्ट उत्पादन विदेशमा लगेर पुरस्कृत गराई पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने काममा तल्लिन छौँ । विदेशीहरुको आइटिनरीमा हाम्रा गन्तव्यहरु राखेपछि पर्यटकहरु आउछन् । त्यसपछि यहाँको एयरलाइन्स, होटल, ट्याक्सी, रेष्टुरेन्ट लगायत व्यापार व्यवसाय फस्टाउँछ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरु गरिरहेका छौँ । जहाँबाट पर्यटनको प्रवद्र्धन गरिरहेका छौँ ।
स्वरोजगारको रुपमा सुरु गरेकाहरु करर्पोरेट कल्चरमा आइरहेका छौँ
ट्राभल एजेन्सि विविधताको व्यवसाय छ । जतिधेरै लगानी पनि गर्न सकिने र थोरै पुँजिबाट पनि गर्न सकिने अवस्था छ । आजको बजार कर्पोरेट युगमा रुपमान्तरण हुँदै छ । आज स्वरोजगारको रुपमा सुरु गरेकाहरु करर्पोरेट कल्चरमा आइरहेका छौँ । यस व्यवसायमा धेरै चाहिँ मध्यमवर्गको लगानी छ ।
२०१८ जनवरीको सुरुमा गोल्डेन जुब्लीको समापन समारोह
हाम्रो पहिलो दिन ९ डिसेम्बरमा गोल्डेन जुब्ली र कन्भेन्सनले पारित गरेका एजेण्डालाई १० डिसेम्बरमा हुने साधारणसभाले अनुमोदन गर्छ । दुई÷दुई वर्षमा कार्यसिमिति परिवर्तशील छ । ३० औँ वर्ष व्यवसायमा रहेका मानिस नेतृत्वमा छन् । हामी हाम्रो सिकाइलाई व्यवहारमा उतार्न चाहन्छौँ । जसमा लागिपरेका छौँ । यो हाम्रो गोल्डेन जुब्लीको सुरुवात हो । यसलाई सन २०१८ को जनवरीको सुरुमा समापन समारोह पनि गर्दैछौँ । त्यसमा उपलब्धीको समिक्षा गर्दै ट्राभल र टुरलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? आर्थिक रुपमा कसरी समृद्ध गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाली व्यवसायीलाई कसरी प्रतिस्पर्धि बनाएर अघि बढाउने भन्ने आधारामा रणनीति बनाउँदैछौँ ।
पर्यटनको विकास र विस्तारका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य
म स्वर्ण जयन्ती समारोहको संयोजकको हैसियतले के भन्छु भने नाट्टामा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन । यस उद्योगलाई भरपर्दो र इज्तदारीलो बनाउन सबै मिलेर अघि बढ्न आग्रह गर्दछु । समय सुहाउँदो व्यवसायलाई परिमार्जन गर्न सबै लाग्नुपर्छ । नेपालको पर्यटन विस्तारको लागि नेपाल एयरलाइन्सलाई बलियो बनाउन प¥र्यो । जसले पर्यटकको ओहर दोहारमा सहयोग पुग्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य छ । बाटोको बिस्तार मुख्य कुरा हो । हामीले रारा ताल राम्रो छ त भन्छौँ तर रारा जान यातायातको सहज सुविधा छैन । सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रसम्म पर्यटक पुग्नसक्ने पहुँच विस्तार गर्न पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।
केही वर्षमै २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्छौँ
सरकारले नीतिगत रुपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । राम्रो काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई विभिन्न छुट दिएर व्यवसायमा थप अकर्षण दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चीन, थाइल्याण्ड, भुटान, मलेसिया लगायतका देशहरु भन्दा पर्यटनमा हामी महंगो सावित भएका छौं । यसका लागि विभिन्न कुरामा सरकारले अनुदान दिएर सहयोग गर्नुपर्छ । सुविधा सम्पन्न गाडीहरु किन्न सहयोग गर्नुपर्छ । यसो भएमा हामी केही वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्राउन सक्छौँ ।
प्रकाशित मितिः २०७३ मंसिर २२
अन्तर्वार्ता राम्रो लाग्यो।